Abenzi Bokuqeqeshwa Kwangaphandle - Ifektri nabahlinzeki baseChina Abangaphandle
Izikhwama ze-Outdoor Fitness Training Sports Gym Tote Duffel Lageage ezinegumbi lezicathulo
Bag Isikhwama Esikhulu Esisebenzisekayo Se-Gym Duffle】 Usayizi: 56 ″ x 28.8 ″ x 28 ″, yisikhwama sokuzivocavoca esihlangene, singena kahle kakhulu endaweni yokuzivocavoca / yeklabhu, noma njengesikhwama sokuthwala ngaphansi kwesihlalo sendiza. Isisindo: 1.0kg,. Futhi iza nezibambo ezimbili futhi eguquguqukayo, ibhande lehlombe elitholakalayo lokuthwala ngokwezifiso.
I-Battle Rope Poly Dacron Yokuzivocavoca Izindophi Zokuzivocavoca I-Gym Muscle Toning Ukuzivocavoca Amandla Omzimba Wokuzivocavoca Ukuzivocavoca Ukuqina
Ukuzivocavoca ngentambo okulwa nezintambo kuzonikeza noma ngubani imiphumela emihle noma ngabe ukusebenza kwakho kuyisidingo kwezemidlalo, ezempi, ukuphoqelelwa komthetho, noma ufisa ukubukeka futhi uzizwe ungcono. Iphuzu eliyisihluthulelo okufanele ulikhumbule nge-Battling Rope System ukuthi ngeke nje ukhiqize amandla amaningi, kepha uzogcina amandla isikhathi eside.
I-1) Amandla we-aerobic and anaerobic andisiwe
2) Amandla andisiwe namandla
3) Amandla andisiwe namandla wezikhathi ezinde
I-4) Isisusa esengeziwe nokukhuthazela kwengqondo
5) Ukusebenza okwandisiwe kuzo zonke izici zempilo yakho